लुकेका टेक्स्टहरूको बारेमा अधिक सिक्दै र कसरी प्रतिबन्ध लगाउँदैन - Semalt सुरक्षा सल्लाहहरू
गुगलको एल्गोरिथ्मलाई हेरफेर गर्न तपाईंको पृष्ठमा लुकेका पाठहरू राख्नु तपाईंको वेबसाइटलाई दण्डित गर्ने एउटा निश्चित तरिका हो। यद्यपि त्यहाँ केहि उदाहरणहरू छन् जहाँ सामग्री वा पाठहरू लुकाउन आवश्यक पर्दछ। गुगलले यो बुझ्दछ र वेबपृष्ठहरूका लागि विशेष सर्तहरूमा सामग्रीहरू लुकाउनको लागि यो सम्भव बनाएको छ।
प्रयोगकर्ताहरूबाट पाठहरू लुकाउने र यसलाई केवल खोजी ईन्जिनहरूमा देखाउनु पुरानो स्पामिming टेक्निक हो। आज, त्यहाँ Google मार्गनिर्देशनहरूको अनुसरण गर्ने तरिकामा सामग्री लुकाउनको लागि पर्याप्त कारणहरू छन्।
यससँग धेरै एसईओ फाइदाहरू छन्, जस्तै:
क्रल गरिएको पृष्ठहरूको संख्या बढ्यो
प्रयोगकर्ता सment्लग्नता बढेको छ
लुकेका पदहरू के हुन्?
तपाईंले फेला पार्नुहुने लुकेका पाठहरूको सबैभन्दा सामान्य परिभाषा यो हो कि यो स्पामिंग टेक्निक हो जुन खोज ईन्जिनको शुरुआती वर्षहरूमा प्रयोग गरियो। पछाडि फिर्ता खोज ईन्जिनहरूले खोज प्रश्नहरूको जवाफ प्रदान गर्न साधारण टेक्स्ट मेल खाने एल्गोरिदममा भर पर्दछ।
खोज इन्जीन एल्गोरिथ्म धोका दिन, साइट एक साइट आगंतुक को लागी सामग्री प्रकाशित र खोज एल्गोरिथ्मबाट पाठ लुकाउन थियो। यी लुकेका पदहरू रैंकिंग उद्देश्यका लागि डिजाइन गरिएको छ, र धेरै पटक, ती कुञ्जी शब्दहरूले भरिएका हुन्छन्। यसले त्यस्ता वेबसाइटहरूलाई खोजी ईन्जिनहरूको लागि लामो निबन्धहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ, जबकि प्रयोगकर्ताहरू वा उपभोक्ताहरूले रूपान्तरण-अनुकूलित वेब पृष्ठ प्राप्त गर्दछन्। यदि यो सामान्य स्थिति हो भने, त्यस्ता पृष्ठहरू अनुक्रमित हुन सक्दैन, उनीहरूलाई रैंकिंगको कल्पना नगर्न।
यो सबैको पोइन्ट प्रयोगकर्ताहरूको सामग्री देखाउँनु हो जुन उनीहरूलाई सम्बद्ध लिंक क्लिक गर्न र खरीदहरू गर्न प्रोम्प्ट गर्दछ। यस योजनाको अर्को उद्देश्य खोज ईन्जिन सामग्रीहरू देखाउँनु थियो जुन उनीहरूले देख्न मन पराउँछन् कि त्यस्ता पृष्ठहरूलाई अझ राम्रो दर्जा दिन मद्दत गर्दछ, जब वास्तवमा तिनीहरू असल थिएनन्।
अब सामग्री लुकाउँदा तपाइँ अपराधी हुँदैन, त्यसैले यदि कसैले सामग्री लुकाईरहेको थाहा छ भने, उनीहरूलाई स्क्यामरको रूपमा कुरा गर्न हतार नगर्नुहोस्। भाग्यवस पर्याप्त, त्यहाँ वेबपृष्ठमा सामग्री लुकाउन नैतिक तरीका छन्। सामग्री द्वारा, हामी पाठ, चित्र, भिडियो, इत्यादि सन्दर्भ गर्दै छौं यसलाई तान्नका लागि - यद्यपि यो बुझ्नको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ कि यसले कसरी मोबाइल वेब लेआउटमा असर पार्छ र तपाईंको यूआई कायम राख्छ।
कसरी एक वेब पृष्ठ पदहरू लुकाउन सक्छ?
सामग्री लुकाउन अब त्यहाँ दुई प्रमुख शाखाहरू छन्। त्यहाँ नैतिक र अनुमोदित तरीका छ, र त्यहाँ त्यस्तो उत्तम मार्ग छैन।
पहिलो, हामी सामग्री लुकाउने गलत तरिकाको बारेमा छलफल गर्नेछौं।
"स्प्यामी" तरीका पाठहरू लुकेका थिए
त्यहाँ पाठहरू लुकाउने धेरै तरिकाहरू छन्। सबै भन्दा साधारण तरिका मध्ये एक फन्ट प्रकार र रंग हेरफेर गरेर हो। उदाहरण को लागी, एक वेब पृष्ठ सेतो पृष्ठभूमि मा एक सेतो फन्ट रंग प्रयोग गर्दछ र पृष्ठ को तल राख्छ। अन्य प्रोग्रामरहरूले सामग्रीको स्क्रीनको दायाँ दाहिने पट्टि देखा पर्‍यो जहाँ कसैले पनि तिनीहरूलाई भेट्टाउने छैन।
अर्को विधि होसियारीपूर्वक पाठहरुमा छवि राख्नु, त्यसैले पाठ लुकाएर। यी योजनाहरूको उद्देश्य भनेको सामग्री आगन्तुकहरूको लागि अदृश्य बनाउनु थियो जसले ती सामग्रीहरू देख्न अघि उनीहरूलाई थप कडा हेर्नुपर्नेछ।
जहाँसम्म, माथि उल्लेखित सबै विधिहरू क्लोकिंगका रूपमा चिनिने "सबैभन्दा परिष्कृत" सामग्री लुकाउने विधिहरूमा अन्डरडग मानिन्छ।
क्लोकिंगमा खोजी ईन्जिनहरू पहिचान गर्न र तिनीहरूलाई फरक सामग्री देखाउने समावेश गर्दछ त्यसैले यसको नाम क्लोकिंग। क्लोकिंग नामले सुझाव दिन्छ कि यो एउटा त्यस्तो विज्ञान कल्पित चलचित्रबाट कमाइएको विधि हो जहाँ क्लोकिंग टेक्नोलोजीको प्रयोगले कुनै व्यक्ति वा अन्तरिक्ष जहाजलाई अन्यलाई अदृश्य बनाउँदछ।
त्यस्तै, सामग्री क्लोकिंग टेक्नोलोजी-सक्षम खोज ईन्जिन स्प्यामरहरू पृष्ठको सामग्री खोज ईन्जिनहरूमा देखाउन तर तिनीहरूलाई साइट आगन्तुकहरूबाट लुकाउनुहोस्। यो कोड हो जुन खोज इञ्जिन र प्रयोगकर्ता बीचको भिन्नता छुट्न सक्दछ। यदि स्क्रिप्टले खोजी ईन्जिनको रूपमा आधारितको रूपमा परिभाषित गर्‍यो भने, यसले अनुक्रमणिका हुन बिभिन्न पृष्ठ प्रस्तुत गर्दछ। त्यस्ता पृष्ठहरू रैंकिंगका लागि अत्यधिक अप्टिमाइज गरिएको थियो, तर ती प्रयोगकर्ताहरू (असम्बन्धित इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू) लाई थोरै वा केही प्रयोगको हुँदैनन्।
चीजहरू यति नराम्रो भयो कि HTML कोडमा कुनै ठाउँ थिएन कि पाठहरू लुकाउन सकिँदैन। प्रोग्रामरहरूले यी पदहरूलाई छवि Alt गुणहरूमा राख्न शुरू गरे र पृष्ठको तल इन्फिनिटलमल फन्ट आकारहरू प्रयोग गर्न शुरू गरे। उदाहरण को लागी:
टेक्स्ट साना फन्टहरूमा लेखिएको थियो। यो स्पष्ट छ कि तपाइँलाई त्यहाँ के लेखिएको हो भनेर थाहा थिएन। यसलाई अझ गाह्रो र कम स्पष्ट बनाउनको लागि, फन्टको र these्ग भने यी फन्टहरू जस्तो परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यस विन्दुमा, तपाइँले बुझ्नु पनि हुन्न कि त्यहाँ एक शब्द वा कीवर्डको शब्द लेखिएको थियो।
पाठहरू टिप्पणी ट्यागमा पनि लुकाउन सकिन्थ्यो, जसमा खोजी ईन्जिनलाई अनुक्रमणिका वा पढ्नको प्रतिष्ठा हुँदैन।
यी धेरै जसो प्राविधिक ध्वनीहरूको रूपमा हास्यास्पद छ, सबै वेबसाइटको आवश्यकताहरू एक वा दुई सम्बद्ध साइट एसईओहरू यसलाई काम गर्न भन्नको लागि छन्, र हजारौं वेबसाइटहरूले अभ्यास गर्न थाले।
के लुकेका पदहरु स्प्यामी बनाउँछ?
केही वेबसाइटहरूले अझै लुकेका पदहरू प्रयोग गर्नुको मुख्य कारण यो हो कि यो स्प्याम पृष्ठबाट अर्को पृष्ठमा CTR सुधार गर्न एक धेरै प्रभावी उपकरण हो जहाँ उपभोक्ताहरूले उनीहरूलाई आवश्यक जानकारी फेला पार्न वा खरीद गर्न सक्दछन्। यो चारा र स्विच जस्तै हो। अर्कोको लागि उत्पादन स्विच गर्नुको सट्टा, यस विधिले बिक्रीको लागि उत्पादन प्रस्ताव गर्दछ र उपभोक्तालाई यी उत्पादनहरू खरीद गर्न नयाँ वेबपृष्ठमा पठाउँदछ।
त्यसोभए जब एक उपभोक्ताले SERP बाट क्लिक गर्दछ, तिनीहरूलाई वेब पृष्ठको साथ सामना गर्नुपर्नेछ विशेष रूपान्तरणहरूका लागि अनुकूल बनाउनको लागि। अत्यधिक अप्टिमाइज गरिएको पृष्ठमा, प्रयोगकर्ताहरूले नयाँ लि on्कमा क्लिक गर्छन् जसले तिनीहरूलाई वेबसाइटमा लैजान्छन् वास्तविक उत्पादनहरूको साथ उनीहरूले खरीदको आशा गर्दछन्। संभावनाहरू यो एक वास्तविक खरीद साइट हो जुन क्रममा आवश्यकता पूरा गर्दैन। त्यसोभए ट्राफिक प्राप्त गर्न, तिनीहरूले ईन्जिन एल्गोरिदम खोजी गर्न एक फरक पृष्ठ देखाउनु पर्छ।
यो जहाँ क्लोकिंग आउँछ।
यस बिन्दुमा, उनीहरूले टाचेको सामग्री विगतमा वास्तविक वेब पृष्ठ हुनसक्दछ, जुन वेबपृष्ठमा स poin्केत गर्ने वास्तविक लि links्कहरू थिए, त्यसैले यसको स्थान प्राप्त गर्ने सम्भावनाहरू बढाउँदै। यस तरिकाले, खोज ईन्जिनहरूले भरिएको सामग्रीको इनबाउन्ड लिंक अनुसरण गर्दछ, पुरानो सामग्री फेला पार्दछ, र यसलाई क्रमबद्ध गर्दछ। अर्को तर्फ, साइट आगंतुकहरूले रूपान्तरण-अनुकूलित सामग्रीको साथ नियमित वेबपेज देख्नेछन्।
अन्तमा, यो वेबसाइटहरूको लागि बिक्री र क्लिकहरू सुधार गर्न उत्कृष्ट रणनीति थियो।
अनैतिक लुकेका पदहरूका लागि के दण्डहरू छन्?
वेबपृष्ठहरू जसले अझै लुकिरहेका पाठहरू अनैतिक रूपमा प्रयोग गर्दछ अझै पनि गुगलको साथ क्रसहेरहरूमा छ। यी वेबसाइटहरू गुगलबाट म्यानुअल कार्य प्राप्त गर्न खतरामा छन्। यसको मतलव गुगलमा कसैले साईट समीक्षा गर्नेछ र न्याय गर्ने कि यसले गुगलका दिशानिर्देशहरूलाई उल्लंघन गर्छ कि गर्दैन।
के त्यहाँ लुकेका पाठ र लुकाइएको ट्याब गरिएको सामग्री बीचको भिन्नता छ?
हो त्यहाँ छ। यो धेरै वेबसाइट मालिकहरूको लागि भ्रमित हुन सक्छ। धेरै मालिकहरू त्रसित हुन्छन् जब उनीहरूले यो महसुस गर्दछ कि उनीहरूले त्यस्तो सामग्री सुविधा प्रदान गर्दछ जुन ट्याब पछाडि लुकेको छ जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले त्यस्ता सामग्री हेर्न सक्षम हुन क्लिक गर्नुपर्दछ। ठीक छ, आफ्नो स्नायु शान्त पार्न तपाईंसँग गिलास पानी हुन सक्छ: तपाईंको साइट सुरक्षित छ। त्यहाँ ट्याबको पछाडि लुकेका पाठहरू र सामग्रीहरूमा भिन्नता छ।
मुख्य भिन्नता यो हो कि वेब पृष्ठले प्रयोगकर्ताहरूलाई दृश्यात्मक संकेत प्रदान गर्दछ जुन ट्याबको पछाडि थप सामग्रीहरू छन्, र ती प्रयोगकर्ताहरूले यो जानकारी कसरी पहुँच गर्ने भनेर देखाउँछन्। "अधिक पढ्नुहोस्" जस्ता वाक्यांशहरू प्रयोगकर्ताहरूलाई सामान्य प्रम्प्टहरू हुन्। त्यस्ता अवस्थाहरूमा, तपाइँ यसो गर्नुहुन्न कि सामग्री लुकाइएको छ यदि यो हालै देखिने छैन।
गुगलका दिशानिर्देशहरूलाई उल्लंघन नगरी कसरी सामग्री लुकाउन सकिन्छ?
यो महत्त्वपूर्ण छ कि प्रयोगकर्ताहरूले के खोज ईन्जिन एल्गोरिदम देख्दछन्। यसले गुगललाई उनीहरूको श्रोतालाई वेबसाइटहरूको उत्तम संस्करणहरू प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ। गुगलले यस विधिलाई उनीहरूको खोज इञ्जिनलाई वर्षौंसम्म सुधार गर्न प्रयोग गर्‍यो, र गुगलले यो पुष्टि गर्न जारी राख्छ कि लुकेका सामग्रीहरू कसरी ह्याण्डल गर्दछन् केहि पनि परिवर्तन भएको छैन।
२०१ 2013 देखि ट्याबहरू पछाडि सामग्री लुकाउनु भनेको पाठहरू लुकाउनको लागि एक सुरक्षित तरिका हो, र तपाईंलाई आत्तिनु पर्दैन। गुगलको वेबमास्टर प्रवृत्ति विश्लेषक ग्यारी इलिसले पनि पुष्टि गरीएको छ कि ट्याब गरिएको सामग्री पूर्ण रूपमा ठीक छ। वास्तवमा, २०१ 2016 मा, उनले यो पनि पुष्टि गरे कि गुगलले त्यस्ता सामग्रीलाई कुनै पनि प्रकारमा यसको सारलाई अवमूल्यन नगरी अनुक्रमित गर्‍यो।
जहाँसम्म, प्रमाणले यो कुरालाई औंल्याउँछ कि यो लुकेको सामग्रीको मात्र रूप हो गुगलले सहिष्णु।
SEOको लागि लुकेका सामग्रीहरू प्रयोग गर्नु किन महत्त्वपूर्ण छ?
लुकेका सामग्रीहरू प्रयोग गर्नु फाइदाजनक हुन सक्दछ किनकि आजका धेरै वेबसाईट आगन्तुकहरूले सामग्री पढ्न मोबाइल उपकरणहरू प्रयोग गर्छन्।
यसले नयाँ चुनौती सिर्जना गर्दछ, विशेष गरी जब सानो स्क्रिनमा सामग्री प्रस्तुत गर्दा राम्रो उपयोगकर्ता अनुभव कायम राख्ने। सानो सतह क्षेत्र र ठूला सामग्रीहरूको साथ, पर्दामा अधिक जानकारी निचोर्न प्रत्येक अवसर लिनुपर्दछ। ट्याबहरू पछाडि सामग्री लुकाउन वेबपृष्ठ अधिक व्यवस्थित बनाउँछ, र प्रयोगकर्ताहरूले साइट प्रयोग गरेर राम्रो महसुस गर्दछन्।
हिडन टेक्स्टहरू, जब सही रूपमा गरिन्छ, सानो उपकरणमा देखाईएको सामग्रीको मात्रा अधिकतम गर्न सक्दछ, जसले खोजी ईन्जिनले अनुक्रमणिकामा फेला पार्ने सामग्रीको मात्रा बढाउन मद्दत गर्दछ। कम क्लस्टर गरिएको वेब पृष्ठले यसको अर्थ प्रयोगकर्ताहरूले सजिलै वेबसाइट नेभिगेट गर्न सक्दछन् र महत्त्वपूर्ण बाधा बिना सामग्रीहरू मार्फत जान सक्छन्। किनकि गुगलले मोबाईल उन्मुख खोज इञ्जिनमा संक्रमण गरिरहेको छ, यो केहि चीज हो जुन प्रत्येक वेबसाइटले आफ्नो वेबपृष्ठहरूमा राख्नुपर्दछ।
हाम्रो अन्य उपयोगी SEO सुझावहरूको जाँच गर्नुहोस् Semalt ब्लग।